Su'aal 737 MAX
1 sano 2 bilood ka hor #742 by jimidget
Boeing waxay ku soo baxday 737-MAX oo isticmaalaysa makiinadaha isku midka ah sida 787 oo dhaqaale ahaan u shaqeynaya, sidaas darteedna diyaaradaha diyaaradaha ah muddo dheer. waxaa jiri kara waxyaabo kale oo aan ku ogyahay. Ma jiraa fursad kasta oo mustaqbalka ah ee aan ku arki karnaa in download ah?
1 sano 2 bilood ka hor #743 by Jamesman8
Waxaa jira waxyaabo badan oo khaldan oo ku saabsan boostada. Ugu horeyntii, 737MAX wuxuu ahaa mid ku dhawaad ​​hal sano iyo badh, waxana uu duulimaad duulaya tan iyo May 2017 (Malindo Air). Marka labaad, HAHAHAHAHAHAHAHAHA. 737MAX iyo 787 waxay isticmaalaan makiinadaha isku midka ah? Ma waxaad tahay nin sare? Mashiinnada loo isticmaalo 787 waxay ku dhowyihiin qiyaasta isku midka ah oo dhan xajmiga 737. 787 waxay isticmaashaa GE GEnx iyo Rolls Royce Trent 1000, isla markaa 737 waxay isticmaashaa CFM LEAP-1B. Ma jiraan noocyo fiican oo diyaarad u ah FSX / P3D marka laga reebo dibadda TDS. PMDG ma soo saartay ereygan taas oo macquul ah.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Whit
1 sano 2 bilood ka hor #744 by jimidget
Dharka. Jamesman8 wuxuu leeyahay dhibaato xagga maskaxda ah. Waxaa laga yaabaa inaan mar walba sax u helin, laakiin, waqtigan ayaan ku soo dhowaaday. Halkan waa bogagga Boeing ee tiknoolojiyada ee ku saabsan miisaanka MAX ee 737. Waxaa laga yaabaa in qof muhiima uu ka jawaabi karo su'aashan:
1 sano 2 bilood ka hor #745 by Jamesman8
Markaad tixraacayso waxaad timaadaa meel u dhaw dhow, waxay isticmaalaan matooro gebi ahaanba kala duwan, waxaana ka jawaabay su'aashaada. TDS 737 MAX waxaa laga helayaa boggan. Tag soo qaado.
1 sano 2 bilood ka hor #746 by Gh0stRider203
Waxaan ku siinayaa ikhtiyaarka TWO. 1) oo la socdo kana mid noqo midba midka kale; ama 2) Waxaan xidhaa nambarkan. Ma jirto doorasho 3rd.
1 sano 2 bilood ka hor #749 by Jamesman8
Waad xiri kartaa, waxaan u jawaabay su'aashiisa. Anigu ma caydhin waxaan kaliya sheegayaa xaqiiqooyin saafi ah.
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 45
1 sano 2 bilood ka hor #751 by Dariussssss
Sababtoo ah mawduucan oo dhan ayaa iga dhigey inaan qosliyo sida marnaba ka hor, anigu ma tirtiri doono ..... lol
1 sano 2 bilood ka hor #764 by superskullmaster
Waxaa laga yaabaa in aniga aniga uun uun yahay laakiin waxaan dareemayaa sida qof aad u qurux badan isaga weydiisto, waa inaad siisaa iyaga. Dhammaanteen waxaan haynaa internetka iyo google, ma arko wax qalad ah sida habka asalka rasmiga ah looga jawaabay. Miyuu qurux badnaa inkastoo.
1 sano 2 bilood ka hor #778 by Gh0stRider203
Waxaa loo xoqay sidii loo adeegi lahaa tusaale ahaan waxa aan samaynaynin marka la sameynayo boostada (iyo sida (~ qufaca ~ "aan" uga jawaabin boosaskaas).
1 sano 2 bilood ka hor #781 by julian1245
Guys waa maxay jimidget isku dayayaan in ay yiraahdaan nasiib way nuqul ka qaadeen mishiinka 787 waxayna ku dhejiyeen 737 laakiin maxaad u maleyneysaa inay yihiin 2 makiinada kala duwan laakiin waxay helayaan waxa jimidget isku dayayo inay sheegaan inay u eg yihiin isla motorka waafaqsan.
Sidoo kale fadlan dadka aan sali lahayn sababtoo ah waan ogahay inay ku jiraan boggan